Miteraka Fanantenana Ho amin’ny Fanovana Amin’ny Androm-pirenena Ho an’ny Mpianatra Ireo Lehiben’ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2016 9:01 GMT
Mpianatra ao amin'ny Oniversite Sharif ao Iran mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana taorian'ny fifidianana 2009. Sary: Wikimedia Commons
Tamin'ny herinandro lasa, nanao kabary masiaka nifantoka tamin'izay lazainy fa andraikitra ara-tantaran'ny tanora Iraniana ny mpianatra iray sahisahy ao amin'ny Oniversiten'i Amir Kabir. Tsy ahitana tsikera maranitra momba ny tsy rariny eo amin'ny fitondrana ihany ny kabary, fa koa fiampangana goavana ny politikan'i Iran mamono olona ao Syria ary mangataka amin'ireo ao anatin'ny firenena mba hanana herim-po sy hiaro izay marina . (Jereo ny lahatsary ahitana dikantsoratra teny Anglisy).
Nahatonga ahy tena mirehareha amin'ny maha-Iraniana sy nankafy ny herimpo, ny firehetam-po sy ny sorona nataon'ireo ao anatin'ny firenena ny sary sy ny kabary nitranga tao Iran tamin'ny herinandro lasa. Nanome fanantenana ho ahy ihany koa izy ireo, na dia eo aza ny tsy fisian'ny fanovana lehibe tao Iran, sy ny toe-javatra tena mampahonena ao amin'ny faritra sy manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny kabariny, nanambara i Amir Kabir, mpianatra anjerimanontolo fa “adidintsika sy zontsika ny mahalala momba izany zavatra izany. Tsy maintsy manontany izay nitranga tamin'ny taona 1988 isika. “Iray amin'ireo lohahevitra fady indrindra ny miresaka fandripahana gadra politika tamin'ny taona 1988, ary nipoitra vao haingana toy ny raharaham-bahoaka taorian'ny famoahana raki-peo nandrenesana an'i Ayatollah Ali Montazeri (efa maty) miresaka ny famonoana tambambe ireo gadra tsy nandalo fitsarana. Tamin'ny fandraisam-peo, re i Montazeri, Mpitarika Faratampony lefitra tamin'ny fotoana ny fandripahana hoe “raha ny hevitro, ny heloka lehibe indrindra nandritra ny Repoblika Islamika, izay hanamelohan'ny tantara antsika, dia teo ampelatananao, ary hanoratra ny anaranao toy ny mpamono olona eo amin'ny tantara izy ireo. “
Nanonona ny fanovozan-kevitr'i Montazeri i Amir Kabir, mpianatra, tamin'ny kabariny, nilaza fa “hanameloka antsika ny tantara—raha tsy mijery izany olana izany isika.” Nilaza ny fitohizan'ny ady Iran-Irak, ny famonoana olona mitohy mihitsy aza izy, ary ny fanaovana takalon'aina ireo diplaomaty Amerikana tahaka ny olana izay tokony ho atrehina sy atao fanadihadiana ampahibemaso. Fady taloha ny miresaka ireo lohahevitra tsirairay ireo tao Iran.
Zara raha mifandray amin'ny tantara Iraniana vao haingana ny hevitra momba ny fiovana ifotony, ny idealisma mahaliana sy ny hetsi-bahoaka mivoatra, tsy raharahian'ny gazety amin'ny ankapobeny ary foanan'ny manam-pahefana tamin-kerisetra. Kanefa nanjaka tao amin'ny firenena izany fomba fisaina izany, izany fihantsiana ny fitondrana jadona izany sy ny fanantenana tsy amin-tahotra ho amin'ny fanovana, na dia teo aza ny fijaliana nifandimby nataon'ny didy jadona. Tsirim-panantenana ny hetsiky ny mpianatra sy ny fiarahamonim-pirenena ao Iran ary tena rehareha tokoa, ho an'ny firenena izay mbola miady ho amin'ny fiovana..
Tahaka ny ao amin'ny firenena maro, ara-tantara, nitsangana lohalaharana ho amin'ny fanovana ny mpianatra Iraniana. Tamin'ny 7 Desambra 1953, nitokona ny mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Tehran mba hanohitra ny fanohanan'i Etazonia ny fitondrana jadon'i Shah. Nitranga volana vitsy monja taorian'ny fanonganam-panjakana notohanan'ny CIA mba hanalàna ny praiminisitra voafidy tamin'ny fomba demaokratika, Mohammad Mossadegh izany. Nitifitra ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana ny tafik'i Shah, nahazo hery tamin'ny fanonganam-panjakana, ka nahafaty olona telo. Niteraka fahatezerana ny zava-nitranga ary natao toy ny Androm-pirenena ho an'ny mpianatra ao Iran izany daty izany, ho fanomezam-boninahitra ‘ireo nitolona ho amin'ny fahalalahana, sy manohy izany lalana izany.
Nanohitra ny fitondra jadona sy ny tsirefesimandidy, na ny an'ny Shah na ny an'ny fitondrana ara-pivavahana ny hetsiky ny mpianatra Iraniana. Nandritra ny telopolo taona farany, nanohitra ny filoha tony fihetsika sy ny mpitrifana izy ireo. Niafara tamin'ny hetsika mihoso-drà ny hetsiky ny mpianatra taona 1999 tao Tehran, izay am-polony no namoy ny ainy ary an'arivony ireo mpianatra voasambotra. Tsara ny manamarika fa i Hassan Rouhani, filoha ankehitriny lazaina fa tony fihetsika ao Iran no sekreteran'ny Filan-kevi-piarovana Faratampony tao amin'ny Firenena, ary nampitandrina ireo mpanao fihetsiketsehana fa heloka bevava “azo saziana amin'ny fanamelohana ho faty” ny fihetsik'izy ireo.” Folo taona tatỳ aoriana, nifanandrina tamin'ny governemanta mihemotra an'i Mahmoud Ahmadinejad ny mpianatra, ary nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana faobe miampanga ny hoso-pifidianana sy ny tsy fisian'ny maha-ara-dalàna ny fitondrana tamin'ny taona 2009..
Zava-dehibe ny manamarika fa na dia eo aza ireo fikasana hanasokajy ny hetsiky ny mpianatra ho toy ny mifantoka amin'ny fanovana, niloa-peo tamin'ny fanoheran'izy ireo izay lazaina fa reformista tahaka an'i Khatami sy ilay antsoina hoe Rouhani “tony fihetsika” ny mpianatry ny oniversite. Tamin'ny volana Aogositra, nanoratra taratasy misokatra ho an'i Rouhani ny vondrona mpianatra 92 ary nitsikera ny fitondrany ho tsy mahomby amin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana fanavaozana sy fandrosoana. Ahitana fampidirana ireo mpianatra mavitrika ara-politika anaty lisitra mainty, matetika antsoina hoe “mpianatra nahazo kintana”- izay voaroaka tao amin'ny oniveriste ary tsy raisina mianatra mamarana ny fianarany intsony. Nilaza ny fitondran'i Rouhani fa hamarana io fomba fanao io izy ireo, fampanantenana mbola tsy tanteraka.
Ny mpianatra mpikatroka no tena lasibatry ny fitondrana. Anisan'izany ireo mpikatroka tahaka an'i Arash Sadeghi, izay nitokona tsy nihinan-kanina nandritra ny 50 andro mahery rehefa nisazy tsy ara-drariny mandritra 15 taona an-tranomaizina noho ny heloka bevava ara-politika.
Tamin'ny kabariny, nilaza izay mety ho lohahevitra maika indrindra mikasika ny fandraisan'anjara rehetra an'i Tehran amin'ny fandringanana an'i Syria sy ny famonoana ny mponina ao aminy ihany koa i Amir Kabir, mpianatry ny anjerimanontolo. “Mino aho fa hanameloka antsika ny tantara satria nangina momba an'i Syria sy ny fandripahana mahatsiravina mitranga ao isika,” hoy ny mpitarika mpianatra. Niresaka tamin'i Ali Motaheri, mpikambana ao amin'ny parlemanta izay nanatrika ny famoriam-bahoaka, hoy izy, “amin'ny maha-solontenan'ny ny vahoaka, manontany anao aho, ao anatin'ny lalana marina ao Syria ve isika? Olona dimy hetsy no namoy ny ainy. Mora ny mitanisa tarehimarika, kanefa ripaka ny taranaka iray manontolo … . Meloka tokoa isika rehefa tojo ny ranomason'ny ankizy Syriana. “
Satria mijery an'i Aleppo may izao tontolo izao, namaritra tamin'ny fomba mazava mikasika ny zava-misy amin'ny fandraisan'anjaran'i Iran amin'ny fandravana ny firenena, sy ny fampidiran-doza ny fahalalahany ity tovolahy ity tamin'ny filazana izany tsy rariny izany.
Nisy ihany koa ny kabary mahaliana mitovy amin'izany izay nataon'ny mpianatra iray hafa ao amin'ny Oniversiten'i Tabriz, nidera ny tantaran'ny ny hetsiky ny mpianatra ao Iran izy ary nitsikera ny toe-draharaha ara-politika manasazy ao amin'ny firenena. Namarana ny kabariny tamin'ny fihantsiana mahatalanjona, na marani-tsaina izy, manome ity fanamarihana manaraka ity tahaka ny hoe noesorin'ny mpandrindra ara-bakiteny ny mikrô teny an-tanany ;
“Mety managadra sy mampahory antsika amin'ny maha-mpianatra izy ireo, saingy tsia, tsy zavatra mety ho rava ny hetsiky ny mpianatra. Maharitra izany hevitra izany, satria marina. Hahita ny toerany eo anivon'ny fiaraha-monina sy eo amin'ny tantara izany hevitra izany. Raha milatsaka eo am-pelantanantsika ny ity saina ity amin'izao fotoana izao, dia olon-kafa no haka azy indray rahampitso …. Ary antsika ny ho avy. Manàna finoana amin'ny faharesen-dahatra fa ny hetsiky ny mpianatra sy hetsika revolisionera marina no handova ny ampitso. “
Mahaliana ny fanamarihana tsy noho ny votoaty ihany fa noho ny kabary ahitana filazana mivantana ny kabary malaza nataon'i Mousa Khiabani, iray amin'ireo mpitarika ny Mojahedinan'ny vahoaka Iraniana (PMOI) (indraindray antsoina hoe Mojahedin-e Khalq (MEK)) fotoana fohy taorian'ny revolisiona 1979. Saika naverina manontolo ny lahatenin'i Khiabani rehetra miompana amin'ilay antso maharitra mandrakizay hiaro foto-kevitra na hevitra iray ilay mpianatra, ary ilay petra-kevitra manao hoe raha misy olona lavo, hisy olona hafa handray ny faneva ary hanohy ny tolona. Voaràra ao Iran ny PMOI, ary mety hiteraka sazy an-tranomazina lavabe sy fanamelohana ho faty ny fifaneraserana rehetra amin'ny vondrona tahaka izany.
Azo antoka fa mifandrohy amin'ny toe-draharaha revolisionera nanjaka tao amin'ny oniversiten'i Iran nandritra ny taompolo 1970 ny kabarin'ny mpianatra tao amin'ny Oniversite Tabriz, raha mpianatra no nandrafitra ireo vondrona revolisionera isan-karazany manerana ny firenena, sy ny fahatsapan'ny rehetra fandresena mananontanona manoloana ny herin'ny taloha sady ratsy.
Zavatra ilaintsika rehetra amin'izao fotoana izao ny fanantenana. Nitsangana hatrany teo anatrehan'ny tantaran'i Iran aho, indrindra ireo hetsika revolisionerany sy ny herimpon'ny olon-tsotrany. Tamin'ny herinandro lasa, nahatsiaro aho fa tsy zavatry ny lasa fotsiny ireo, fa fanahy mbola mbola velona sy salama tsara ankehitriny. Manome fanantenana ho ahy ny lahateny nataon'ireo tovolahy roa be herim-po ireo fa tsy very ny lalan'ny fahamarinana, ny rariny sy ny herimpo ao Iran, raha fantatrao izay tokony haleha.